Culimada Al-Shabaab oo CC SHAKUUR ku eedeeyey “gaalnimo” kuna baaqay in magac cusub loo bixiyo - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Culimada Al-Shabaab oo CC SHAKUUR ku eedeeyey “gaalnimo” kuna baaqay in magac cusub loo bixiyo
Muqdisho (Caasimada Online) – Culimada taageersan kooxda Al-Shabaab ayaa ka hadlay hadal muran badan abuuray oo uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka jeediyey dalka Jarmalka, kaasi oo culimada qaar ay ku sheegeen inuu xadiis saxiix ah ku beeniyey.
Wadaadada Al-Shabaab oo ka hadlay idaacadda Andalus ee Al-Shabaab ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku eedeeyey “inuu Allah ku kufriyey”, sida ay hadalka u dhigeen.
Wadaadada Al-Shabaab waxa ay sidoo kale ku eedeeyeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu “adduunyo raadin darteed ugu gefay axaadiista suubanaha.”
Culimada Al-Shabaab ayaa dhanka kale ku baaqay in Cabdiraxmaan “laga beddalo magaca wanaagsan ee uu wato loona bixiyo Cabdi Kaffuur ama Cabdi Diinaar.”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu iska diiday inuu beeniyey xadiis saxiix ah, isaga oo sheegay inuusan marnaba si gaar ah u xusin xadiis.